Posted on मार्च 7, 2010 by आर. बी. बुढाथोकी
तपाईंलाई लाग्ला कतार गएका नेपाली त्यहींका अरबी वा कुनै विदेशीको कम्पनीमा काम गर्छन् । हो, ठीकै ठान्नुभयो । तर, एउटा कुरा मिलेन- काम गर्ने कम्पनी विदेशीका भए पनि हाजिर गर्ने र तलब बुझ्ने कार्यालय अधिकांश नेपालीकै छन् । कतारमा ठूला-ठूला र नाम चलेका अधिकांश नेपालीको कामै स्वदेशी श्रमिक आपूर्ति गर्ने हो । उनीहरू त्यहाँका कम्पनीमा सम्झौता गरी ठेक्कामा कामदार लैजान्छन् । त्यहाँबाट ठूलो मात्रामा पैसा उठाउँछन् र झिनो तलब दिन्छन् । त्यो पनि सबैले समयमा दिँदैनन् ।
भर्खरै यस्तै एउटा घटना भयो । कतारका अति धनी र ‘प्रतिष्ठित’ एक नेपालीलाई दूतावासले बोलायो । उनी जाँदा त्यहाँ केही श्रमिक पुगिसकेका थिए । नेपाली राजदूत र श्रम सहचरीले उनलाई स्वदेशी श्रमिकलाई तलब नदिएको र भिसा नवीकरण नगरेको’bout सोधे । उनले टार्न खोजे र आफू निर्दोष रहेको दाबी गरे । जब दूतावासले ‘श्रम अदालत पठाउने’ चेतावनी दियो, मजदुरका समस्या सुल्झाउन उनी राजी भए ।
त्यसैले दूतावासलाई मेरो आग्रह छ- अब हात्तीलाई तर्साउन नाङ्लो ठटाउने होइन, पुल्ठो बालेर लखेट्नुपर्छ । श्रम अदालत पठाउने धम्की दिने होइन, पठाउनुपर्छ । शोषणको पराकाष्ठा भोगेको नेपालीलाई क्षतिपूर्तिको गतिलो मुठो हातमा थमाइदिनुपर्छ । तब पो देशले साँच्चिकै दूत पठाएको महसुस हुनेछ । धन्य कतारका नियम-कानुन र कार्यान्वयन गर्ने निकाय- पैसा र तागतका भरमा कोही अन्यायमा पर्न पाउँदैन ।
अर्कातिर कतारमा कामदारका लागि प्रशस्त अवसर छन् । कुनै कम्पनी बन्द भयो वा कुनै कारण नेपाली अप्ठ्यारामा परे भने लैजानेले चाहे सजिलै अर्को काम दिलाउन सक्छ । तर, ऊ त्यसका लागि पहल गर्दैन । बरु नयाँ अवसरका नाममा देशबाट नयाँ व्यक्ति झिकाई अर्को सिकार बनाउँछ ।
« विपाशा बासु,सेक्सी नम्बर एक नयाँ नेपाल क्लब कुवेतले दुई टीम भलीबल खेलाडीको छनोट »